Sideen lacag u diri karaa anigoo adeegsanaya aappka? : TalkRemit Customer Portal
Sideen lacag u diri karaa anigoo adeegsanaya aappka? Print
1) Ka gal aappka adoo adeegsanaya cinwaanka emaylka aad isku diiwaan galisay TalkRemit iyo lambarka sirta ah ee aad sameeysatay xiliga is diiwaan galinta.
8) Marxaladda ugu dambeysa waa qeybta lacag bixinta. Waxaad xulaneysaa habka aad lacagtan aad direyso aad u bixin lehyd. Waxaad heli doontaa xulashooyinka kala ah Boorsadda Hawada, Kaarka iyo Bangiga. Dooro midka aad kubixineyso kadib taabo ?Bixi?.